प्रेम के हो ? सच्चा प्रेम के लाई भनिन्छ ? Nepalpatra प्रेम के हो ? सच्चा प्रेम के लाई भनिन्छ ?
प्रेम के हो ? सच्चा प्रेम के लाई भनिन्छ ?
प्रेम के हो ? सच्चा प्रेम के लाई भनिन्छ ? प्रेम दुई आत्माको पवित्र मिलनलाई भन्दछन् । प्रेम गर्नु अपराध होइन तर प्रेम गरेर धोका दिनु पाप हो, अपराध हो । हुन त प्रेमको आयमिक अर्थ र महत्व छ । आमा बाबाले सन्तानलाई गर्ने माया र भाईले बहिनीलाई गर्ने माया, नातागोताले गर्ने माया सवै प्रेम अन्तर्गत पर्दछ ।
तर, नवयौवना वीच खासगरी बिपरित-लिंगीमा हुने मानसिक आकर्षण र समपर्ण भावलाई प्रेम भनेर बुझिएको छ । यस्तो प्रेममा त्याग हुन्छ, बलिदान हुन्छ । प्रेम अन्धो हुन्छ भन्नुको अर्थ हो, सच्चा प्रेममा बाह्य व्यवधानहरु गौंण बन्छन् । त्यहाँ न जातले छेक्छ न धनले छेक्छ, न रुपले तगारो लगाउँछ ।
प्रेमको यो विन्दुसम्म आई पुग्नका लागि नव-यौवना बीच एक अर्कोमा आकर्षण हुनुपर्छ । त्यही आकर्षणले तानेर उनीहरुलाई यस्तो मिलन विन्दुमा पुर्‍याउँछ, जहाँ उनीहरु आत्मिक रुपले जोडिन पुग्छन् । भनिन्छ, प्रेम स्वत हुने कुरा हो । तर, कुनै न कुनै रुपमा प्रेम व्यक्त हुनुपर्छ । प्रेम पोखिनुपर्छ । प्रेम पग्लिनुपर्छ । तब न प्रेम हुन्छ ।
अहिले प्रेममा छलकपड बढी देखिएको छ । मैले यस्ता प्रेमी देखेको छु, जसले प्रेममा केवल छल गरेर प्रेमिकाको हत्यासम्म हुने गरेको छ । आज समय एकाइसौं शताब्दी पार गरेको छ । यहाँ केवल मतलब पुरा हुदासम्म प्रेम गर्ने मतलब पुरा भएपछि छोड्ने यस्ता घटना देख्न सकिन्छ ।
निश्चय पनि यो सुहाउने कुरा होइन । कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नुअघि उनको मनोभावना बुझ्नुपर्छ । यदि आफुले मन पराएको व्यक्ति आफुप्रति सकारात्मक छ भने प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । प्रेम प्रस्ताव भनेको प्रेम व्यक्त गर्ने हो । प्रेम दर्शाउने थुप्रै माध्यम छन् । दुई-चार पटक हाई हेल्लो भन्दैमा त्यसलाई प्रेम मान्नु मुर्खता हो मित्थ्या हो ।
आई लभ यु भन्दैमा एउटा फूल दिदैमा प्रेम सम्झनु पनि मुर्खता हो । प्रेमको भाव त पवित्र मिलनबाट सुरू हुनुपर्छ । पवित्र मिलन भन्नाले सेक्स नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । पवित्र मिलनमा इन्तारको ठूलो भूमिका हुन्छ तड्पन हुन्छ । एकले अर्कालाई जीवन भरिको साथ निभाउने बाचा हुनुपर्छ ।
आज अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार फेब्रुअरी १४ मा प्रणय (भ्यालेनटाइन) दिवस मनाइन्छ । हुनत यो पश्चिमाहरूले ल्याएको देखिन्छ । चाहे जे होस यो पर्व मनाउनु पर्छ । दुई आत्माको पवित्र मिलनको विछोड भएको दिनलाई हामीले प्रेम दिवसको रूपमा मनाउनु पर्दछ ।
प्रेम के हो र प्रेम किन गरिन्छ ?
प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे के हो ? यो किन मनाइन्छ ?
*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर, साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार तथा नेपालपत्रको स्वास्थ्य स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।
#प्रेम के हो
के धरानवासीको हर्ष बन्लान् त नवनिर्वाचित मेयर हर्क राई ?
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुन प्रदेशका कुन दलका कति भए निर्वाचित ?
प्रा. डा. जोशीको सात दशकको अनुभव : ‘अमेरिकाले अकल्पनीय विकास गर्‍यो’
यी हुन् लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने सात बौद्ध गन्तव्य
‘मतदानको दिन आज के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन’